Bewazi yini ukuthi cishe izigidi ezintathu emhlabeni wonke bafa minyaka yonke ekubeni umlutha - ukubhema? Lokhu okubi, okuyinto sifushanise ukuphila cishe yingxenye yesine yekhulu leminyaka. Omunye kubantu abayishumi emhlabeni yokubulawa ugwayi - kungcono Russian.
Ngokusho imithombo iyatholakala, kunenkolelo yokuthi kungokwalabo Columbus ziqala ukuchayeka kagwayi. Abomdabu American esetshenziswa ugwayi ukuxhumana kanye nonkulunkulu babo, futhi baba imilutha ye amahlamvu ugwayi, ukuzisebenzisa njengoba a painkiller.
Abomdabu wanika amahlamvu zikagwayi Columbus, kodwa wawalahla ngaphandle sithokozela isipho. Kodwa iqembu ngohambo lwakhe, okuthiwa Rodrigo De Jerez, waba nesithakazelo inqubo ukubhema bese baba imilutha ke ngokwami. izitshalo ezinhle namazambane notamatisi kwalethwa ekhaya. Amacala Ezihlubuki osolwa lezihambi ngokuqondene noSathane, obhemayo esibi uyaboshwa.
Kancane kancane, ugwayi kwaba eRussia. Okokuqala, ukusetshenziswa kwalo asikhuthazeki yini, njalo kanye lenkosi M. F. Romanove ugwayi babephathwa omubi kakhulu, ucabangela ke ezazishushumbiswa izimpahla. Kube emzabalazweni kanye ukubhema: nokusakazwa kwayo kanye ukusetshenziswa kwabantu Bajeziselwa futhi bahlawuliswe. Ngemva kokuba umlilo e Moscow kwafika isimemezelo sasebukhosini esithinta okungekho ugwayi azithengiswa ekhulwini XVII, engayekanga yena, futhi abazange bayisebenzise. Abangalaleli walindela isigwebo sentambo, kodwa, lashintshwa elinye iqembu isigwebo - anqunywe ekhaleni lakhe.
Njengoba ukubhema enza umzimba womuntu
I-nicotine - ingxenye eyinhloko kagwayi. Kungani ekulweni ukubhema futhi ababhemayo? Cabanga uhlu isampula imiphumela-nicotine nentuthu eningi enqabayo imikhiqizo:
Izinga CO, okuyinto kunciphisa okuqukethwe oxygen egazini.
Okungenzeka ukuya esikhathini ngaphambi kwesikhathi.
Futhi enkulu yokuba kwamathambo.
kubalulekile ikakhulukazi ekulweni ukubhema ngoba abesifazane yokuzala, njengoba kukhona amathuba wake waphazamiseka okungazelelwe yokukhulelwa, ukufa fetus utero futhi isisindo sokuzalwa.
Ngengozi sina nesifo samaphaphu kanye Oncology.
Ukuwohloka isimo kwesikhumba namazinyo, okuholela ukushwabana kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi.
Ingabe lolu hlu engalethi umphakathi ufinyelele esiphethweni sokuthi ekulweni ukubhema kumele kwenziwe phakathi komkhawulo esiqinile? Iyingozi hhayi kuphela esebenzayo kodwa futhi inqubo yokwenziwa. Ngisho non-ababhemayo, ukuhogela intuthu ayingozi osikilidi, angaphansi imikhiqizo enobungozi-nicotine.
Isasasa ugwayi ngabhema
Ukubhema kubhekwa elimazayo futhi ngoba wayebhema uzama ukuzondla njalo-nicotine. indoda noGwayi-free iba nolaka, ukuhluthuka, futhi ephefumula intuthu uyazithanda yenjabulo. Kungani obhemayo akafi ngokushesha? Iqiniso lokuthi umzimba wakhe wakha yokuvimbela i-nicotine. Indoda benza umbuthano never-ophela: umzimba kukhipha kuyindlela yokuvimbela ukuthi neutralizes-nicotine.
Ukuhlala umphakathi, wonke umuntu kufanele ucabange ngempilo, hhayi kuphela othi yena, kodwa futhi nabantu ababemzungezile. Kuyadingeka ukuba sithathe izinyathelo zokunqanda ukubhema, kokubili ngokuzimela kanye ezingeni wombuso. Namuhla, ugwayi kuthiwa ekubeni ezibizayo, kodwa akunandaba ukuthi ngalabo ababhema ngeke ngibheme kunjalo. Ngakho, sidinga ngokuzimela futhi yonke indawo ukuba benze izimanga futhi inkulumo-ze emelene imikhuba eyingozi, efana: Ayikho Day noGwayi 2013, okwenzeka ngo emadolobheni amaningi Russia ngaphansi kwesiqubulo esithi: "Ukubhema akuyona imfashini!"
Kungani ugwayi electronic kukhona yingozi empilweni?
Kanjani ukuyeka ukubhema ngosizo soda? izindlela Izibuyekezo
Army jar: ezihlukahlukene kanye nokuzikhethela izici
Cashback inkonzo LetyShops: ukubuyekezwa, izici namasevisi
Lesizalo Hyperplasia: Izimbangela Nezingozi izimpawu